Ếch nấu gì ngon? Tổng hợp 22 cách làm các món ngon từ ếch dễ làm | Muasalebang - Muasalebang
Ếch nấu gì ngon? Tổng hợp 22 cách làm các món ngon từ ếch dễ làm | Muasalebang
Đang Đọc: Ếch nấu gì ngon? Tổng hợp 22 cách làm các món ngon từ ếch dễ làm | Muasalebang in Muasalebang
1 1. Ixoxo elithosiwe eline-lemongrass kanye nopelepele
2 2. I-Frog Frog Roll
3 3. Ixoxo elithosiwe elinesoso yezinhlanzi
4 4. Ixoxo elithosiwe elinamahlumela e-bamboo
5 5. Ixoxo elithosiwe elinamaqabunga aluhlaza
6 6. Ixoxo Elibongwe Ngobhontshisi Kabhanana
7 7. Ixoxo elinosawoti
8 8. Ixoxo elithosiwe ngebhotela
9 9. Ixoxo Elithosiwe Ngesitshalo Seqanda
10 10. Braised frog
11 11. Ixoxo eliboshwe nge-lemongrass ne-chili
12 12. Ixoxo elithosiwe elinamaqabunga aluhlaza
13 13. Ibhodwe elishisayo lexoxo
14 14. Ixoxo elinopelepele
15 15. Ixoxo eline-turmeric
16 16. Isikhumba sexoxo esijulile
17 17. Ixoxo nesobho elimuncu
18 18. Ukheri wexoxo
19 19. Ixoxo ngotshani
20 20. Isaladi yexoxo
21 21. Iselesele Quang Noodle
22 22. Iphalishi lesele
1. Ixoxo elithosiwe eline-lemongrass kanye nopelepele
Isidlo sokuqala u-Dien May XANH afuna ukwabelana nawe ngaso iresiphi yexoxo elibabayo, elibabayo, elithosiwe eline-lemongrass kanye nepelepele.
Inyama yexoxo izingelwa ngokulinganayo, ithenda ngokusesilinganisweni, imunca ngokulinganayo ukunambitheka kwesici sesithako ngasinye lapho inyakaziswa ndawonye, ​​iphunga likapelepele wensimbi linonongo futhi linongwe, ukudla kunezigaxa ngendlela exakile. I-garlic, i-lemongrass, i-chili egayiwe yengeza ukunambitheka okubabayo esitsheni samaxoxo sikhanga kakhulu.
Izinongo ungangeza noma uzinciphise ngokuya ngokunambitha komndeni wakho ukuze udale ixoxo elimnandi nelithosiwe elimnandi kakhulu eline-lemongrass kanye nepelepele!
2. I-Frog Frog Roll
Ngezinyathelo ezilula zokucubungula, ungenza ixoxo elimnandi elithosiwe nelayisi ekhaya.
Amaxoxo ahlanzwa ngezinyathelo ezimbalwa nje ezisheshayo, ahlanjululwe ngokulinganayo nge-lemongrass, i-garlic kanye ne-shallots egayiwe ephumelelayo ekuqedeni iphunga, okwandisa ukunambitheka okukhangayo kwesitsha. Lapho isiqediwe, ingxenye ngayinye yenyama yexoxo izingelwa ngokulinganayo, ngephunga elincanyana le-curry powder, kwenezela ubisi lukakhukhunathi olunamafutha.
Inyama yexoxo ithambile futhi iyahlafuna, inamafutha, imnandi kodwa ayiyisicefe, idliwa nelayisi elimhlophe, umndeni wakho uzoyithanda ngempela!
3. Ixoxo elithosiwe elinesoso yezinhlanzi
Inyama yexoxo ithoswe kancane epanini eligcwele amafutha kuze kube yilapho iphenduka igolide, isanda kuphekwa, bese ifakwa epanini lokuthosa eminye imizuzu embalwa nge-chili garlic fish sauce. Ilangabi eliphansi lanele nje ukusiza inyama yexoxo imunce ukunambitheka okucebile ngaphandle kokwesaba ukushisa inyama.
Isendlalelo sesinongo esinosawoti esinezela kancane okubabayo, siboshwe ngokulinganayo esiqeshini ngasinye senyama yexoxo, isinongo sisiza ukulinganisa ukunambitheka kwesitsha ngokuphelele.
Akukho lutho olungcono kunokusebenzisa lelixoxo elithosiwe elinesosi yenhlanzi njengesitsha esiyinhloko ethreyini yomndeni yerayisi. Ukunambitheka okungavamile kuvusa inkanuko yezingane kalula!
4. Ixoxo elithosiwe elinamahlumela e-bamboo
Ama-bamboo amahlumela awumthombo omnandi wokudla okucwebezelayo, okunezindlela ezihlukahlukene zokucubungula, futhi ahlanganiswa kalula nezinye izithako ukwenza izitsha ezimnandi ukuze umndeni wakho uzijabulele. Ake sibone ukuthi ulenza kanjani ixoxo elimnandi elithosiwe ngehlumela le-bamboo khona lapha!
Isitsha esishisayo sinokunambitheka okumnandi kwemvelo kwenyama yexoxo, enikezwa ngamahlumela amasha e-bamboo noma amahlumela e-bamboo amuncu. Inhlanganisela yezinongo ifakwe ngokucophelela, i-sweet and savory ihlanganiswe ngokuphelele.
Ukwengeza ama-scallions, i-ground pepper isiza ukwandisa ukukhanga kwe-stir-fry enkulu.
Xem Thêm Gợi ý những món quà 1-6 cho bé yêu ý nghĩa theo độ tuổi | Muasalebang
5. Ixoxo elithosiwe elinamaqabunga aluhlaza
Ixoxo liwumthombo wokudla oqukethe amanani amaningi omsoco, olungele impilo yabasebenzisi, ikakhulukazi ukunambitheka okusha, okulungele ukusetshenziswa njengezithako zokwenza izitsha ezinhle zomndeni.
Inyama yexoxo ehlanganiswe namaqabunga e-guise ivame ukutholakala lapho kulungiselelwa izitsha ezithosiwe ezihlwabusayo, namuhla ake sizame ukuguqulwa okuncane ukwenza ixoxo elikhangayo elithosiwe elinamaqabunga e-guise. Inyama yexoxo egosiwe ngokulinganayo enamaqabunga e-guise isiza inyama ukuthi igcine ukunambitheka kwayo okungokwemvelo, yengeze iphunga elimnandi lamahlamvu athambile acwebile.
Kuyisidlo esiphelele sokukusiza ukuthi ushintshe ukunambitheka komndeni wakho!
6. Ixoxo Elibongwe Ngobhontshisi Kabhanana
Ixoxo le-Braised elinobhanana nobhontshisi liyisidlo esikhethekile, esinokunambitheka okumnandi okuvela ezinhlobonhlobo zezithako. Inhlanganisela yenyama yexoxo eqinile neqinile, ubhanana oluhlaza okotshani onezigaxa kanye ne-tofu enambithekayo, okwengeza amaqabunga e-perilla anephunga elimnandi, kusiza ukuvusa ukunambitheka komsebenzisi ngokushesha nje lapho isidlo sesiphakwa.
Kuyisidlo esinokunambitheka okukhangayo kwaseNyakatho kusuka kokunambitha kuya kumbala omuhle, okwenza ukudla kwakho kukhetheke kakhulu.
7. Ixoxo elinosawoti
Isitsha esinombala ogqamile okunzima ukumelana naso yixoxo eligazingiwe elinosawoti ocwebezelayo. Ngaphandle kwezithako eziningi eziyinkimbinkimbi, usengakwazi ukwenza izitsha ezimnandi ukuze umndeni wakho uzijabulele!
Inyama yexoxo ihuqwe ngokulinganayo ngongqimba lwe-cornstarch ngaphandle ukuze yakhe uqweqwe olucwebezelayo, inyakaze-othoswe ku-garlic ogayiwe onephunga elimnandi kanye nopelepele nosawoti ogazingiwe onosawoti, oxutshwe nesinongo esincane ukuze ubambe ukunambitheka.
Ixoxo elilula eligazingiwe ngosawoti, elengeza ipuleti likasawoti kanye nolamula kapelepele uma lidliwe lifaneleka kakhulu emaphathini amancane anomoya womndeni futhi liwukudla okulula kakhulu!
8. Ixoxo elithosiwe ngebhotela
Inyama yexoxo ilungiswa ngokucophelela futhi igaywe ngezinongo ezijwayelekile emakhishini omndeni waseVietnam, isinongo esincane, ushukela, upelepele omncane ogayiwe kanye nesweli egayiwe ukuze usize ukudala ukunambitheka okucebile kusiqephu ngasinye senyama emnandi yexoxo.
Ungqimba lukafulawa othosiwe luhlanganiswe ngokulinganayo ngaphandle, lwengeza ibhotela legolide ne-garlic sauce, uma ithosiwe, inombala omuhle, iphunga elimnandi namafutha ngaphandle kwesithukuthezi. Khumbula ukudla nemifino eluhlaza, engeza isoso kachili ukuze uzwe ukunambitheka okumnandi okugcwele okulethwa yilesi sidlo esithosiwe esikhangayo!
9. Ixoxo Elithosiwe Ngesitshalo Seqanda
Isitshalo seqanda sivame ukusetshenziselwa ukulungisa izitsha ezithosiwe noma izitsha ezithosiwe ngenxa yokunambitheka kwaso okuthambile, okumnandi kanye nobumnandi bemvelo. Ngakho-ke, lapho uhlanganisa inyama yexoxo nesitshalo seqanda ukwenza isidlo sexoxo esishisayo, ifaneleka ngokwedlulele, ubumnandi buphindwe kabili.
Isitsha sibuye sengezwe amaqabunga e-perilla, amaqabunga e-guise lapho exutshwa ndawonye, ​​iphunga elimnandi liyakhanga ngokwedlulele. Thatha ucezu olu-1 lwenyama yexoxo eqinile, ucezu olu-1 lwesitshalo seqanda esithambile futhi esicebile, bese wengeza isoso yenhlanzi kagalikhi encane, imosha kakhulu!
10. Braised frog
Isitshalo seqanda sikakhukhunathi, esaziwa nangokuthi isitshalo seqanda, sinyakaziswa ngenyama yexoxo efakwe izinongo, ize ivuthwe ngokulinganayo, engeza amanzi bese upheka emlilweni omncane kuze kuvuthwe zonke izithako.
Inyama yexoxo ephekiwe ethambile, inyama ehlafunwayo ephakelwa isitshalo seqanda sikakhukhunathi inobumnandi bemvelo obukhanyayo bemifino emisha, isidlo sidaywa sibe nombala ophuzi okhanyayo, uma sidliwa, sinephunga elibi elengeza ukukhanga kwesitsha.
Khonza ngelayisi elimhlophe elishisayo, limnandi kakhulu!
11. Ixoxo eliboshwe nge-lemongrass ne-chili
Uma ukwazi ukuthenga amaxoxo amasha kodwa ungazi ukuthi yini okumele uyenzele umndeni wakho, zama iresiphi elandelayo yamaxoxo anotshani belamula kanye nepelepele.
I-lemongrass ebabayo kanye ne-chili flavour ihlangana nezinongo ezinongwe ngobuchule ukuze kukhangelwe ixoxo elicebile eliyisitshulu elinotshani belamula kanye nepelepele. Ukunambitheka okumnandi nosawoti kumnandi nje, kunezela iphunga lesici se-lemongrass egayiwe, ukudla nelayisi elimhlophe elishisayo akuyona into engcono!
Faka ipuleti lemifino eluhlaza ukuze uhambisane nalo, kuhle!
12. Ixoxo elithosiwe elinamaqabunga aluhlaza
Ixoxo elithosiwe elinamaqabunga aluhlaza linesibindi nesiko le-rustic culinary labaseNtshonalanga. Inyama yexoxo ehlanganiswe nenyama eluhlaza igaywe kahle, ixutshwe nezinongo ezicebile, amaqanda enkukhu enamafutha, amaqabunga amagwava anephunga elimnandi, ukwenza inhlama emnandi ehlafunwayo.
Uma lithosiwe, ikhekhe lexoxo liba yigolide nhlangothi zombili, ingaphandle liyacwebezela futhi ingaphakathi liyahlafuna futhi limnandi ngaphandle kokoma noma ukuwohloka.
Roll ngephepha lerayisi, imifino eluhlaza ecwiliswe ngesosi emnandi nemuncu futhi ujabulele ngelayisi elimhlophe elishisayo noma i-vermicelli entsha. Ama-flavour alinganisela ngokuvumelana, okusiza ukuguqula ukunambitheka kokudla okujwayelekile komndeni ukuze kukhange nakakhulu.
13. Ibhodwe elishisayo lexoxo
Zama ukushintsha ukunambitheka komndeni ngebhodwe elishisayo lexoxo elimnandi, inyama yexoxo ihluke kakhulu ekucutshungulweni kwakho ukuze ukwazi ukwenza izitsha ezihlukene ze-hotpot kuye ngokuthandwa ngumndeni wakho.
Inyama yexoxo ehlanganiswe nezithako ezihlukene ezivela emaqabungeni e-guise, amahlumela e-bamboo amuncu, ukwengeza irayisi ye-batch, i-tofu,… kanye nebhodwe elishisayo kufakwe ukunambitheka okucebile, okumnandi nokumuncu. Lungiselela ibhodwe elishisayo lebhodwe elishisayo, vele ujabulele inyama yexoxo ezingelwa ngokulinganayo, ethambile, emnandi ngokwemvelo, ehlinzekwa ngemifino kanye ne-vermicelli, ifaneleka ngokwedlulele ezinsukwini zemvula kanje!
14. Ixoxo elinopelepele
Ixoxo elinopelepele, usuke wazama? Uma kungenjalo, zama ukuyenzela umndeni wakho ngokushesha. Umbala unombala osagolide nombala we-caramel obushelelezi, futhi iphunga elimnandi likapelepele ophansi libonakala lingena kuzo zonke izingcezu zenyama yexoxo.
Inyama yexoxo ethambile futhi emnandi igaywa ngezinongo zifakwe emanzini anosawoti ngokuphelele, inyama isabugcine ubumnandi bemvelo enyameni yexoxo okungekona konke ukudla onakho. Ukunambitheka kunosawoti, kumnandi futhi kumnandi, kwengeza ukunambitheka okuncane okubabayo, okuvuselela ukunambitheka komsebenzisi.
Ulenza kanjani ilayisi elilula, elisheshayo kodwa elikhanga kakhulu, lizame manje!
15. Ixoxo eline-turmeric
Kuseyindishi yexoxo eboshiwe, kodwa enezici zayo ezihlukile ezineresiphi yesitshulu sexoxo esine-turmeric, okuqinisekisiwe ukuletha ukudla komndeni wakho ngemibala yegolide emisha nedonsa amehlo.
Ucezu ngalunye lwenyama yexoxo ludaywe ngokulinganayo lube phuzi kusukela kumpushana we-turmeric onephunga elimnandi.Uma usugcwele, engeza upelepele omncane namaqabunga e-perilla aqoshiwe, wengeze ukunambitheka okucebile esitsheni.
Umhluzi unokunambitheka okusawoti, okuxubene nobumnandi okwanele, okubabayo okuncane, okuqinisekisiwe ukuthi umndeni wakho uzothanda!
16. Isikhumba sexoxo esijulile
Lapho becubungula amaxoxo, abantu bavame ukuba nomkhuba wokulahla isikhumba sexoxo, kodwa bambalwa abantu abazi ukuthi isikhumba sexoxo siwumthombo wokudla okunokunambitheka okumnandi okuhlukile. Uma wazi ukupheka, ungenza izitsha eziluthayo!
Xem Thêm Sườn heo nấu gì ngon? Tổng hợp 34 món ngon từ sườn heo hấp dẫn thơm ngon | Muasalebang
Isikhumba sexoxo singasetshenziswa njengokudla okuthosiwe, ukunambitheka okungavamile, iphunga elinamandla likagalikhi kanye nepelepele, elixutshwe nephunga elinamafutha ebhotela. Zonke izingubo zifana nengaphandle lesikhumba esincane, esicwebezelayo sexoxo.
Isikhumba sexoxo esithosiwe siyisiphuzo esihle futhi siyisidlo esikhumbulekayo uma sinikezwa ne-chili noma i-ketchup. Nge-Dien May XANH, bheka ngokushesha ukuthi kwenziwa kanjani futhi ubonise amakhono akho ukuze umndeni ujabulele.
17. Ixoxo nesobho elimuncu
Uma unomuzwa wokuthi ukudla komndeni akunambitheka ngokwanele, ungakwazi ukwengeza isobho lexoxo elimnandi nelimuncu ukuze usize umndeni wakho ujabulele ukudla ngokugcwele.
Umhluzi unokunambitheka okumnandi okutholakala enyameni yexoxo, wengeza ukunambitheka okumuncu okumaphakathi kukaphayinaphu, utamatisi, nejusi ye-tamarind njengokungathi kuncibilike ngokuphelele kusinongo esinongwe ngokucophelela.
Ngokucutshungulwa ngokushesha, inyama yexoxo ingashintshwa ibe yisobho elimuncu eliningi elijwayelekile njengesobho elimuncu elinuka kamnandi, isobho elimuncu elilula lamaqabunga e-Giang noma isobho elinothile elimuncu elinamaqabunga amancane e-tamarind.
18. Ukheri wexoxo
Uma unesikhathi, hlela iphathi encane namalungu omndeni futhi ubonise amakhono akho ekhishini nge-frog curry ukuphatha wonke umuntu.
I-Curry dish inemibala egqamile, umbala omuhle wegolide, iphunga elimnandi, uma ubheka nje, uzoyithanda. Ukunambitheka okunamafutha okusuka obisini olusha, okuhlinzekwa nge-taro enambithekayo, inyama ethambile yexoxo, elungele ukusetshenziswa ne-vermicelli noma ukucwiliswa ngesinkwa esishisayo esishisayo.
Ukujabulela ukhari omnandi ngenkathi wabelana ngezindaba ezincane kwenza iphathi ibe mnandi kakhulu!
19. Ixoxo ngotshani
Ixoxo elithosiwe elinotshani liyisidlo esiletha umuzwa ongavamile emndenini wakho, ngezinyathelo ezilula kakhulu. Izithako ezi-2 eziyinhloko: i-lemongrass ende esikiwe kanye nenyama yexoxo emnandi, lapho ithosiwe yaba nsundu osagolide ngezinongo ezifakwe emanzini ngokugcwele kusenesikhathi.
Isitsha sigcwaliswa ngombala wegolide ofanayo, ukunambitheka kwe-lemongrass enephunga elimnandi nokunambitheka okumnandi okuthambile, okuqinisekisiwe ukuthi kuzodliwa ngaso leso sikhathi!
20. Isaladi yexoxo
Zama indlela entsha yokucubungula ngeresiphi yesaladi yexoxo elimnandi nelimuncu, evuselela ukunambitheka kwabasebenzisi ngokushesha nje lapho beyinambitha.
Imibala ekhanyayo, edonsa amehlo, idonsa kalula ukunaka kwabantu, iphunga elimnandi lamakhambi, amaqabunga e-laksa noma u-anyanisi. I-sauce emnandi neyomuncu idlala indima ebalulekile lapho udala isaladi ekhangayo.
Inyama yexoxo iqinile, imnandi, ihanjiswa nemifino eluhlaza, umango oluhlaza, iselele elisikiwe eliluhlaza, ukunambitheka okumuncu, kufafazwa ngamakinati athosiwe, afakwe ama-crackers ama-shrimp futhi ujabulele!
21. Iselesele Quang Noodle
Ama-noodle e-Quang Frog amboza ukunambitheka okuvamile kwe-Da Nang, uma uke wazama lesi sidlo esimnandi, kunzima ukukukhohlwa.
I-flavour yesoso esetshenziswa nama-Quang noodles inothe ngomhluzi wamathambo engulube, inephunga elimnandi lika-anyanisi, i-lemongrass, nama-scallions, ngenxa yokubiliswa isikhathi esithile. Inyama yexoxo, ingulube egayiwe inyakaziswa-othosiwe ngokulinganayo, ihanjiswa ngama-noodle athambile, imifino emisha, okwenza kube nzima kuwe ukwenqaba!
22. Iphalishi lesele
Inyama yexoxo iqukethe umsoco ophezulu, ukunambitheka okumnandi, ukuthungwa okuthambile, ukudla okulula kakhulu. Indlela yokucubungula ihluke kakhulu, ngaphezu kwezitsha eziboshiwe, ezithosiwe, ezithosiwe, noma ezimbizeni ezishisayo, ungenza nephalishi lexoxo elifudumele, elisiza ukufudumala abantu ngezikhathi zantambama ezinemvula ebandayo.
Imbewu yephalishi isakazwa ngokulinganayo, ithambile, ngendlela yokupheka ngenyama yexoxo ethosiwe, edliwa namakhowe angamagaqa angajwayelekile. Noma ngokuhluka okuncane endleleni yokucubungula, egcwele isiko laseSingapore lokupheka, inyama yexoxo inyakaziswa-ethosiwe ngezinongo ezicebile, yengeza iwayini elimnandi lebhilikosi lesinamoni, impushana ebabayo ye-chili, … kunzima ukumelana!
Sethemba ukuthi ngale nhlanganisela yezindlela ezilula ezingu-22 zokwenza izitsha zexoxo ezimnandi i-Dien May XANH esanda kwabelana ngayo, ingakusiza wengeze ukunambitheka okwengeziwe ekudleni komndeni wakho!
Kuhlelwe ngu-Pham Hong Han • Kuthunyelwe ngoJuni 2, 2021
Galaxy A30 32GB Chính Hãng, Giá Rẻ | Muasalebang
Tổng hợp 99+ tin nhắn chúc Tết 2022 ý nghĩa và ấn tượng nhất | Muasalebang